"Nervishki kudingeka aphathe" - sithi kumuntu oye ucasukelane ngokweqile, gratuitously enobudlova, uthambekela okungazelelwe lokhu kushintshashintsha kwemizwa. "Azikho nezinzwa akwanele" - esikusho thina, lapho sibhekene nezinkinga zokuphila, okuyinto Ubonakala wanqwabelanisa nhlangothi zonke, ukuze izandla zehliswa.
Yezinzwa sisithandele umzimba womuntu ezifana anezikhala obukhulu njengoba imithambo yegazi, kodwa uma onomopho, kulezi - uqobo ubungqabavu. Futhi uma noma kuphi lutho kubuhlungu, kodwa noma kunjalo azizwe ukukhathala, ukukhathala, abantu abaningi abasinaki futhi ukungabi nasithakazelo lutho konke, khona-ke uhlelo lwakho sezinzwa "niphihlizwe" futhi ludinga ukuqiniswa.
Isimiso sezinzwa kuveza self-test kanye yena ithumela isignali akunakungatshazwa zezinkinga. Lezi zimpawu zaziwa kahle. The main wabo - ukunganaki, ukulahlekelwa isifiso, bazilahla imizamo ukushintsha into empilweni yakho, ukuzimisela sibekezelele quo isimo, kungakhathaliseki ukuthi ngeshwa kungenzeka. Ukuba manqikanqika futhi ukungalethembi ngokwabo, ukungabaza njalo kukho konke, ngisho izinhloso zabantu bomdabu, embonweni ka izici nje ongathandeki konke okwenzeka - kakhulu "ukukhuluma" zibonakaliso ukwehla. Ukuwohloka amabutho ezibalulekile uya labetibambile ngokumelene isizinda zihlale zikhathazekile nokwesaba ubani, izimo kuvamile ukuvula uyimbudane, futhi ngenxa yalokho ngesisekelo salokhu kukhona ukucindezeleka njalo. Futhi manje bonke abantu, "ile", ukuyiveza, okungenakho ukulinganisela, whiny noma uhluthuke. Sekuyisikhathi ucabange indlela yokuqinisa isimiso sezinzwa, ongakabi usuqalile nemiphumela engelapheki.
Ngokuvamile, abantu khonga ephephelo ikhofi, iziphuzo energy, utshwala - kodwa -ke luyize, kungcono nzima nje kubukela isimiso sezinzwa. Ngaphezu kwalokho, kukhona umjikelezo omubi, njengoba kusukela evuselela esiqinile ukuqwasha, okuyinto uzama ungawuzwa amaphilisi elele, okuyinto kwandzisa isimo.
Njengoba isimiso sezinzwa ukwelapha, indlela yayo kuyajabulisa futhi kwenza ukunambitha impilo? Amaphilisi lapha - abasizi ezimbi, ngaphandle sedatives izidakamizwa, njengokuthi "Novopassita" "Glycine" nokunye okunjalo. Bona ngokwengxenye athobe nezinzwa engumuntu, kodwa bebodwa ngeke ukuxazulula inkinga. Ngokuvamile, ukwelashwa - lena indlela eziyinhloko ekubhekaneni isifo esiyingozi, kodwa ungenaso ogulayo! Ngakho-ke, kudingeka ucabange indlela yokuqinisa isimiso sezinzwa.
Uyoba kancane, uma kuphela nje kancane ukuba baguqule ukuphila kwabo, futhi okubaluleke - isimo sengqondo kuso. Okokuqala nje, ngokusebenzisa amandla, kodwa baqale ukuhlala esebenzayo, khetha emagobolondweni ayo, uzothola okuthile wonke umuntu, noma wenze noma yiziphi izithakazelo enjalo. Ingabe-ke kufanele ukufunda noma ukunitha, lokuqoqa nobe emaphazili crossword, ingadi noma ethandwa kangaka nge zobumba American. Into esemqoka kuye wena ekhululekile, uphazamisekile futhi kungcono nezinjabulo kancane. Asikho isidingo ukubulala isikhathi - ke kumele kwenziwe nge ukusetshenziswa futhi isithakazelo!
Ingabe umsebenzi kuzolunga! Gymnastics, ukugijima, ukufaneleka, yoga ... Awu, okungenani isikhathi nsuku zonke ohamba kwepaki.
ushintsho kwenkundla kusiza njalo, futhi uma kunjalo ingabe ucabange indlela yokuqinisa isimiso sezinzwa "Okuhlezi emqondweni ukhonkolo" - Makhno iholidi endaweni yokulala, kodwa isikhashana kude. Isebenza ngokuphelele futhi likuvumela ukudala semali amandla, okuyinto oyohlala isikhathi eside. Futhi uma namanje ukufunda lolu limi, amandla elahlekile, futhi ngeke njalo ukushaja "ibhethri" yakho yangaphakathi, umbuzo kanjani ukuqinisa isimiso sezinzwa, ikhambi you ngaphambili futhi for bonke.
Musa ukuhlala kule - lokubheka isikhathi esizayo, futhi ngaso sonke isikhathi ithemba lokuthi lokhu kuzosebenza. Gwema noma iziphi negative imizwa, izingxabano, ukuphikisana, ukuhlukunyezwa. Funda ukuziba - futhi ngokushesha uzizwe kangakanani namandla uke ube! Nikeza ubuthongo obukhulu elizolisayo, hhayi naedites ebusuku futhi angabiki lokulala. Futhi cabanga ezinhle - ngawe, mayelana nomndeni wakho, ngokuphila. Qonda - wena ephelele, nje lifiphele kakhulu nokubukeka engenathemba emhlabeni.
By the way, kuba udumo nje kuphela, kodwa futhi isimiso sezinzwa kumele avikelwe kusukela zisencane. Ingane ayizange yona ikhule Moody futhi "yank" Abazali kudingeka wazi indlela yokuqinisa isimiso sezinzwa ingane. Izincomo ilula: ekuhambisaneni ngosuku (asikho isidingo pander ukuze whims), jikelele ukuqina komzimba , futhi - uthando, hhayi abanye ngokungenangqondo, bonke-wokuthethelela zonke wavunyelwa, futhi uthando lweqiniso, ukwesekwa nokusekela ingane kumele uzizwe njalo.
Leukocyte e umchamo anda: Izimbangela Nemiphumela
Corn Wet ngezinyawo zakho: ukwelashwa ekhaya
Emzaneni Sapper - indawo kuwufanele ukuvakashelwa